Sein Lyan - စိ န် လျှံ: လမ်းကလေးပေါ်က မရေခဲ
Writer Sein Lyan Time 8:58 pm
အချစ်တွေ သိတ်များတဲ့ အကိုကြီး မရေခဲ နဲ့ ကျမှ ရင်ခုန် သလိုလို ရေသောက်ချင်သလိုလို အာခေါင်တွေ ခြောက်သလိုလို ဖြစ်မှပဲ မရေခဲ လေး အဲ့လို ဖြစ်ရတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး၊
မရေခဲ လေးဘဝ ရေခဲ လေးလို အေးမြစေချင်ပါတယ်...
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆို အမှတ်တရတော့ကျန်ခဲ့မှာ သေချာတယ်
ဝတ္တုတိုလား ကျနော့်ဖတ်ရတာတော့ ဒိုင်ယာရီတခု ဖတ်နေရသလိုပဲ။
ရည်းစားများတယ်ဆိုကတည်းက ဖြစ်ရပ်မှန် မဟုတ်တာတော့ သိလိုက်ပါပြီ.. (ဟီးဟီး) ... လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြတာပဲနော်..... ကံကုန်ရင်တော့လည်း ပြန်ရမှာပဲပေါ့....
ကိုဖိုးစိန်တို့ များ ရေခဲရေရောင်းတဲ့ကောင်မလေးတောင်မှ
ကောင်မလေး သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါ
ဒီကောင်လေးနဲ့ တယ်ခက်ပဲ ရေခဲရေရောင်းတဲ့ အမကိုမှ စိတ်ကစားရတယ်လို့ အဟေးဟေးး မှတ်ထား တွေ့မယ်း))
တခါတရံမှာ ချစ်တိုင်းလဲ မညားသလို မချစ်မိပေမဲ့ ပေါင်းစည်းသွားရတာလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ဘ၀မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့ တကယ်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၀မ်းသာစရာတခုပါပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ... မရေခဲ ကို သနားလိုက်တာ။
အို အို ....
များ တတ် လိုက် တဲ့
အ ချစ် တွေ ... !!!!!!!!!!!!!
မရေခဲလေး ရဲ့ နောက်ဘဝ..
ရေလိုအေးလို့ ပန်းလို မွှေးမြပါစေ။
ချစ်သူတိုင်း ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ...
(ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်... တစ်ခေါက်ပြန်လာဖတ်ပီး မန့်သွားတယ်)